नैना भाउजू गाउँ कै सुन्दरी थिइन्, मलाई मात्र हैन गाउँमा सबैको प्यास पूरा गर्थिन - Movies Trends
नैना भाउजू गाउँ कै सुन्दरी थिइन्, मलाई मात्र हैन गाउँमा सबैको प्यास पूरा गर्थिन
एजेन्सी । नैना भाउजू ल्वाङ् सुकुमेल चपाउँदै चौतारीमा निस्किएपछि सबै हाकिमहरूमा उत्साहको सञ्चार हुन्थ्यो । एकछिन गफको सिङौरी खेलेपछि अलिक शान्त मन लिएर सबै आ-आफ्ना निवासतिर लाग्दथे । बाँझी, टटली अलिक कुरौटे खालकी नैना भाउजू सबैलाई हिकेर गफ गर्दथिन् । हिजो अस्ति जस्तै आज पनि सबै हाकिमहरू सिरानबजारको चौतारीमा बसेर गफ चुट्तै थिए । भित्री मनैदेखि सबै नैना भाउजूको प्रतीक्षामा अल्भिmएका थिए र भाउजू त्यस चौतारीमा निस्किएपछि एकछिन उनीसँग जिस्किँदै, इत्रिँदै मुखका कीरा मारेर र्फकने सुरमा थिए । प्रत्येक दिनजसो साढे नौ बजेतिर अफिस जान भनेर नैना भाउजू त्यो चौतारोमा निस्किदा सिरान बजारमा पर्ने चौतारोमा जम्मा भएका हाकिम-अधिकृतहरू उनलाई बीचमा पारेर चारैतिरबाट तछाड-मछाड गरेर गफ चुटिरहेका देखिन्थे । सुदूरविकट भौगोलिक मध्य प्रदेशमा अवस्थित त्यस जिल्लाको सदरमुकाममा केही विद्यार्थी र तल्लो तहका जागीरदारबाहेक महिलावर्गको त्यति उल्लेख्य गतिविधि थिएन । कुनै हाकिमले परिवार लगेको थिएन । कुनै कार्यालयमा एकाध घण्टा र कतिमा त कामै नहुने त्यस दुर्गम जिल्लाको सदरमुकाममा भएभरका अड्डा-अदालतहरू आसपास फैलिएर त्यही सिरानबजार भनिने क्षेत्रमा केन्द्रित थिए ।
अड्डाहरू भएको ठाउँमुनि तल माथि आउने जाने गौँडोकै मुखमा सानो चहुर अनि दुइ विशाल वरपिपल दम्पतिहरू उभिएका थिए । सहस्र हाँगाबिङ्गाहरूमात्र फैलिएको त्यस विशालकाय वरपीपल जोडीको फेदमा अत्यन्त सफा, सुन्दर र फराकिलो चौतारो थियो । बिहानैदेखि त्यही चौतारामा निस्किएर त्यस जिल्लाका हाकिम, अधिकृतहरू चार-पाँच कप चिया सुर्क्याउने, सरकारको आलोचना गर्ने अनि आ-आफ्ना स्वास्नी र छोराछोरीको प्रशंसा गर्ने र बिहान बितिसकेपछि नैना भाउजूसँग एकछिन गफ छाँटेर मुखको चिलाई मेट्ने गर्दथे । महिला विकास अधिकृत बाहेक त्यस जिल्लामा कुनै पनि पोथी हाकिम थिएन । हुन त नैना भाउजू कुनै एक विकासे अड्डामा पियन पदमा कार्यरत थिइन् । तर उनको बसउठ चिनाजानी जिल्लाभरिका सबै हाकिमहरूसँग थियो । ठाउँ हेरी उनको लवाइ पहिरन, बोलीचाली र अनुहार पनि सफा सुग्घर र सभ्य खालको थियो । तीस बत्तीसे जस्ती लाग्ने अलिक टटली खालकी नैना भाउजू सारै पुखली, फरासिली र रसिली थिइन् । उनको बाँझो शरीर बैँसका हाँगाबिँगाहरू झोल्लिएर लत्रिए पनि उति खस्किएको थिएन ।
उनलाई भेट्ने बित्तिकै अलिक ठिटाखाले नाङ्गा हाकिमहरू त काँच्चै निलौलाझैँ गरेर वरपर झुम्मिने गर्दथे । आफ्नो कार्यालयबाट अन्त जाने चिठी बुझाउने काम नैना भाउजूको थियो । उनी हुलाकबाट चलानी गर्ने काम पहिले सकेर अरू कार्यालयतिर लाग्दथिन् र प्रत्येक अड्डाको दर्ता फाँटमा चिठी बुझाएपछि हाकिमको दर्शन’ गरेरमात्र हिँड्थिन् । कसैले चियाचमेना खुवाए खाइ पनि हाल्थिन् र अरू त्यस्तै काम कुराहरू अह्राए लगाए पनि कसैसँग नाइनास्ती गर्दैनथिन् । त्यति बेरै कसैले आवास डेरातिर जाउँ भने पनि हार्दैनथिन् । अनि बिहान बेलुकी यसो समय मिलाएर आउनु भने पनि निर्धारित समयमै टुप्लुक्क आई पुग्थिन् । उनको सेवा सधैँ आत्मीयतापूर्ण स्तरीय र भरपर्दो खालको हुन्थ्यो । कहिलेकाहीँ खरदार सुब्बाहरूले भट्टीमा बसेर हाकिमबाहेक अरूलाई पत्याउदिनन् रे भनेर नैना भाउजूको बारेमा टिका-टिप्पणी गरे पनि बाहिर बजारमा उनको पेशा चरित्र त्यति बुइँबुइँ भएको र गनाएको थाहा थिएन ।
नैना भाउजू आफ्नो हाकिमलाई बढी माया गर्दथिन् । अफिस आउँदा प्रत्येक दिनजसो मौसमअनुसारको फलफूल उनको हातमा देखिन्थ्यो । आँप, कटहर, सुन्तलाजस्ता फलफूल नहुँदा चुत्रो, ऐसेलु, काफल भए पनि लिएरै आउँथिन् । उनको हात कहिल्यै रित्तो हुँदैनथ्यो । “ढोकै कच्ची रैछ सर ! यसो प्रयास गरिस्योस्त आफै खुल्छ ।” नैना भाउजूले हाकिम बस्ने कोठाको कच्ची ढोका बन्द गर्दै भनिन् । यतिबेर दिउँसै उनी एउटा हाकिमको फन्दामा परेकी थिइन् । “बाहिरबाट कसैले तोड्यो भने” उनले शङ्का प्रकट गरिन् । नसाले लठ्ठ परेको त्यो अधिकृत कुनै कुरा सुन्ने अवस्थामा थिएन । तर त्यतिबेर बाहिर कसैले ढोका खोलिहाले पनि त्यसको दुष्परिणाम नैना भाउजूले भन्दा अर्को पक्षले बढी व्यहोर्नु पथ्र्यो । “सरलाई अप्ठ्यारो भयो क्यार ! घुडाहरू कार्पेटमा दरालिएर दरफरिएजस्ता छन् । बरु सोफामाथि ओछ्यान लगाएको भए हुन्थ्यो नि !” नैना भाउजू हाकिमलाई माया देखाएर गन्गन् गर्दै थिइन् । “सोफा जो छ न नैनाजी त्यो धेरै पुरानो भइ लिएछ । त्यसमा बस्दा आवाज पनि नराम्रो गरी लिन्छ । तब बाहिर तलमाथि सब जग सुनाइदिन्छ ।” हाकिम स्पष्ट गर्दै आफ्नो व्यस्तता र लाचारी जनाइरहेका थिए ।
“आज दिउसोमासै घिचेछ मोरो कालेले” नैना भाउजू मनमनै भनिरहेकी थिइन् र अतिशय शराबको गन्धको मुस्लो छल्न यताउता मुन्टो फर्काउँदै पनि थिइन् । “तपाईंलाई अप्ठ्यारो भै राखेछ ! नैनाजी ! यी ली राख्नोस् न सिरानी !” एकछिन विश्राम गर्दै कालो मोटो त्यस व्यक्तिले नैना भाउजूको टाउको र नितम्बमुनि एक-एकवटा डल्लपका चकला राखिदियो । उनका कर्मेन्द्रियहरू अरू बढी सक्रिय हुँदै गए । चुरा बजेर छिर्लिङ्-छिर्लिङ्को आवाज प्रतिध्वनित हुँदा एकातिर आनन्दानुभूतिमा तीव्रता थपिएको थियो भने अर्कोतिर चियो गर्ने शङ्का र लज्जाबोधबाट केही खल्लो लागेजस्तो पनि भइरहेथ्यो । अफिसको चिठी बुझाउन गएकी नैना भाउजू भू-संरक्षण कार्यालयको मोटो धम्मरधूस हाकिमको बाहुपासमा थिइन् आज । धेरैजसो कर्मचारी फिल्डमा काजमा बाहिर गएका थिए भने एउटा बूढो पियन घरि तल्लो तलामा रहेको अफिस रुङ्ने र घरि एक्लै हाँस्दै गएर ढोकामा कान थाप्तै गर्दै थियो । अत्यन्त एकलासे ठाउँमा कार्यालय स्थापना भएको त्यस ठाउँमा नैना भाउजू चिठी पुर्याउन आउँदा पहिले पहिले पनि त्यस्ता घटना भइरहन्थे । आज त झन् उत्तम शुभ साइत जुरेको थियो । हातमुख र अन्य अवयवहरूको सञ्चालन प्रक्रिया झन् मुखर बन्दै कार्यारम्भले देशकाल र आफ्नै परिचय नाघेर अज्ञात यात्रातिर फट्को मारिसकेको रहेछ ।
नसा बढी भएर होला । जुन बेगसाथ सम्वेदनाहरू झुल्किएर नैना भाउजूभित्र अन्तरनिहित हुनुपर्ने हो त्यो अनुभव भएन । अर्को पक्ष अलिक शिथिल बन्दै रक्तसञ्चार मन्द भएपछि अतृप्त इन्द्रियहरू र बिच्किएको मनस्थिति लिएर नैना भाउजू जुरुक्क उठिन् र पेटीकोट धोती मिलाउन थालिन् । “एड्स हुन्छ भन्छन् सर ! हिजोआज सर त केही पनि लाइसिन्न नि ।” नैना भाउजू अर्कोतिर फर्किएर लुगा मिलाउँदै र भन्दै थिइन् । “कहाँ कसले हल्ला गरिदिएछ नचाहिने । यस्तो शुद्ध पहाडी हावापानीमा पनि के को एड्स भैलिन्छ ।” पुरुषपक्ष प्रतिवाद गर्दै थियो । अगिपछि औधि मन पर्ने पदार्थ पनि आज अलिक सिक्सिको र दर्ुगन्धझैँ लाग्यो । उनी त्यहाँबाट हतार-हतार बाटा लागेकी थिइन् । कहिलेकाहीँ उस्तै हाकिमले कर गरेको बेला नैना भाउजू अलिअलि पिउथिन् पनि । आफैले अलिअलि पिएको बेला अरूको गन्ध त्यति खराब लाग्दैनथ्यो । बरु आनन्ददायक प्रतीत हुन्थ्यो । तर आज त्यो मान्छेले दिउँसै ठर्रा घिचेर डुङ्डुङ्ती गनाएको चाहिँ उनलाई पटक्कै मन परेन । सायद त्यो थाहा पाएकी भए आज उनी चिठी लिएर त्यहाँ जाँदै जाँदैनथिन् । गए पनि हाकिमसमक्ष देखा नपरी दर्ता फाँटबाटै फर्किने थिइन्, तर त्यसो भएन । भेटघाटको शिष्टाचार पूरा गर्न गएकी थिइन् । पहिले हाकिमले बोलाउँदैमा कोठाभित्र पसी हालिछन् । पछि फुत्किन खोज्दा अलिक अप्रिय स्थिति सिर्जना भइहाल्न सक्ने देखेर उनी त्यस मिलनविन्दुको सहयात्री बनेकी थिइन् । नैना भाउजूको पूरा नाम नयनकुमारी भए पनि उनको हाजिरीमा नैनामात्र जनाइएको हुन्छ । बाबुआमा दूधे बालक हुँदै विदा भएर अर्कैले हुकाई बढाएकी नैना भाउजू कुनै घरानिया खानदानी परिवारमा कामकाजी महिलाको रूपमा हर्ुर्किएको भान पर्छ । पछि बिहे भएर उनी अर्कै जिल्लामा आइपुगिन् र त्यहाँ पनि पियन पदमा भर्ना भएर नौ-दश वर्षबिताइसकेकी थिइन् । स्वास्नी सुत्केरी हुँदा कुनै हाकिमले उनलाई बच्चा र सुत्केरी स्याहार्ने काममा लगाएर पछि त्यसै अड्डामा जागीरे गराइदिएको थियो । आफ्नो जन्म ठेगाना, मिति, बाबुआमाको नाउँथर आदिसँग एकदमै अनभिज्ञ नैना भाउजू अब त्यस सदरमुकाम र बजारको लागि परिचित नाम बनिसकेको थियो ।
“सर किन हड्बडाउनु भो – बिस्तारै …” यतिबेर उनका ओठ, निधार, गाला जताततै चुम्बन वषर्ाएर नैना भाउजू आफू अनावृत्त बन्दै थिइन् र पालैसँग उन्को कपडा पनि खोल्दै थिइन् । दुवै पूरै अनावृत्त भइसकेपछि पलङमा बस्दै एकअर्काको सीमाक्षेत्रभित्र हस्तक्षेप गर्न थालेका थिए । यतिबेर नैना भाउजू श्रीमान्को पुरानोखाले आवासगृहको भित्री शयनकक्षमा रसरङ्गमा व्यस्त थिइन् । केही वर्षअघिदेखि नै पत्नीवियोगमा परेका विधुर बृद्ध र बेलाबखत दम रक्तचापले सताइरहने यी बबुरा हाकिमले सायद निकै दिनपछि रसरङ्ग मनाउन भनेर नैना भाउजूलाई बोलाएका थिए । भुवाने नाउको उनको अर्दलीले तीनचार दिनको प्रयासपछि मात्र नैना भाउजूलाई बोलाउन सफल भएथ्यो । यता बिहान बेलुकी चाँडो ढिलो र रात साँझ बाहिर बस्न नैना भाउजूलाई अनुमति थिएन । आज बिदाको दिन भए पनि बजारमा जरुरी चीज किन्नु छ भन्ने निहु पारेर नवै बजे भात भान्सा भ्याएर पतिको चङ्गुलबाट उम्केर उभो लागेकी थिइन् उनी । “आज श्रीमान् आउनु भएन” हाकिमहरूको तास खेल्ने अखडामा चर्चा चलेको थियो । “हतार नगरिस्योस्न सर ! बिस्तारै …” नैना भाउजू श्रीमान्को देहरूपी सुख्खा वक्षमा सम्वेदनाका मुना टुसाहरू उमार्दै र पल्लवित हाँगाबिँगाहरू चुम्बनले आद्र बनाउँदै थिइन् । उनको अल्लि टटरो तर चुस्न र हृष्टपुष्ट शरीरका छाती, नाइटा, फिला र स्तनका काला मुन्टाहरू मुसार्दै गर्दा ती प्रौढ व्यक्ति कामेझैँ गर्दै थिए । बढी रक्तचाप, अलिअलि दम अनि भ्यासेक्टोमी गर्नेहरूमा यौन क्षमता घट्छ भन्ने भ्रम आदि शारीरिक मानसिक तनावहरूले उनी त्यसै विचलित भएछन् । नैना भाउजू भने अझै तताएर काम लिने दिने कुरामा आशावादी भएर आरनको खलाँती चलाउँदै थिइन् ।
“उ हेरिस्योस्त सर !” झयालको अन्तरबाट बाहिर इशारा गर्दै नैना भाउजूले भनिन् । उनले पर्दाले अनुहार छोप्दै कोल्टे आँखाले बाहिर हेरे । उनको मूलढोकै अगाडि चउरमा एउटा जवान घोडाले मैमरा घोडीलाई गाँजेर समागम गर्दै रहेछ । दुवै अश्वराग छरेर उद्दाम भिडन्तमा थिए र वरपरको वातावरण कम्पायमान बनाउँदै हिनहिनाइरहेका थिए । घोडीको यौनाङ्गबाट दूधका पचकाहरू छरिँदै थिए । बाँधिएको घोडी नखरा देखाएझैँ र भाग्न फुत्कन प्रयास गर्दै गरेझैँ लाग्थ्यो । तर आफ्नो सम्पूर्ण कामेच्छा समाप्त नगरी न छोडेझैँ घोडाचाहिँ लगातार घोडीमाथि लागिरहेथ्यो । दूधका पचाका घरी बन्द हुँदै र घरी वर्षै थिए । त्यो दृश्यप्रति टोलाइरहेका प्रौढ व्यक्तित्व बिचरा श्रीमान् कुन बेला स्खलित भएछन् उनलाई होसै भएन र त्यहाँ आयोजित कार्यारम्भको लागि उनी असक्षम भइसकेछन् । र्सवाङ्ग नाङ्गी नैना भाउजूका अङ्ग-प्रत्यङ्गहरू हर्ेर्दै उनी बर्बराउँदै थिए – “चीजले ऐन मौकामा काम नदिएपछि … ।”
झण्डै एकघण्टा बितिसकेपछि प्रौढपुरुष बल्लतल्ल लुगा लगाउन थाले । उनी कामेको शरीर र पराजित मानसिकताबाट द्रवीभूत बनिरहेका थिए भने नैना भाउजूको कामोद्वीप्त अनुहार अशान्त थियो । शरीरका धमनीहरू उत्तेजनाको प्रवाहमा उर्लिएका थिए । अलिक लज्जा र घृणाको भाव प्रकट गर्दै कपडा लगाएर नैना भाउजू बिदा माग्दै बाहिर लागिन् । हिँड्ने बेलामा श्रीमान्ले दुइसय रूपैयाँ हातमा राखिदिएथे । उनले पर्दैन भन्दाभन्दै हात थापेर नोट हत्याइन् र धोतीको फुर्कोमा कसिलो गाँठो पारिन् । “बिचरा बूढोले केही काम लिन सकेन । व्यर्थै रहर गरेर बोलायो मात्रै र दुइसय खेर फाल्यो ।” बाहिर निस्किएपछि नैना भाउजू मनमनै भन्दै थिइन् – “तर घुस खाको पैसा त होला नि ।” उनले तर्क थपिन् । आज बिहानैदेखि कचल्टिएको यौन पिपासा शान्त गर्ने उपाय नदेखेर उनी एकछिन घोत्लिएर चौतारोमा बसिन् । ग्राहक बन्न सक्ने जवान पुरुष कतै भेटिएन । उनी अधीर र अशान्त मन लिएर घर फर्किइन् ।
आज बिहानैदेखि सिमसिमे पानी परिरहेकोले चौतारीमा कोही हाकिम आएनन् । “यो खानेपानीको हाकिम त क्या फास्ट रहेछ । अस्तिमात्रै आ’को मान्छे । आजै नैना भाउजूलाई पट्याइसकेछ ।” चौतारी पारीको घरकी मास्र्टर्नीले झयालबाट बाहिर हेर्दै भनी । बहिनीचाहिँले पनि उतै हेर्दै हो मा हो मिलाई । कुरा के थियो भने अघि पछि साढे नौ बजेमात्र चौतारीमा निस्कने नैना भाउजू आज नौ बजे नै निस्किएकी थिइन् । त्यहाँ कोही हाकिम नदेखेपछि खानेपानीको डि.इ. बस्ने आवासभित्र लुसुक्क छिरेकी थिइन् । यस अघि उनलाई त्यहाँ पसेको नदेखेको पनि धेरै भइसकेको कुरा गर्दै दुवै मास्र्टर्नी दिदी-बहिनीहरू एकोतार क्वारक्वार्ती त्यतै आँखा लगाइरहेका थिए । दुवै मास्र्टर्नी तीसबत्तीसे बूढीकन्या थिए । पहिले-पहिले इञ्जिनियर, ओभरसियर, लेखापाल जो जो फेला पर्छ उसैको निवास डेरामा रातसाँझ धाइरहन्थे । तर एउटीले गर्भ फ्याँकेदेखि र अर्कीचाहिँ मालको पियनसँग दश-पन्ध्र दिन हराएर फर्किएपछि दुवै यस मामिलामा र्सतर्क थिए र दुवै एकअर्काको जासुस बनेका थिए ।
नैना भाउजू त्यो आवासभित्र पस्नेबित्तिकै ती दुवैको मन रतिरागले सन्न भयो । त्यस आवासभित्र नैना भाउजू र डि.ई.बीच हुन सक्ने गतिविधि, लीला, क्रीडाको काल्पनिक चित्रले दुवैको मन-मस्तिष्क विहृवल बन्यो र काल्पनिक उत्सुकताले अभिभूत भयो । दुवै आत्मकेन्द्रित बन्दै प्रलोभनको राल काट्तै र छिटो-छिटो थुक निल्दै यौनजन्य क्षरीय रसगन्ध क्षरण गर्न र बहाउन थाले । दुवै कामुकताले अभिभूत थिए । दुवैको मन त्यो निवास बाहिरका ढोका झयालमा कान थापेर भित्रको गतिविधि, आवाज, ध्वनि वा वार्ताहरू सुन्न र चियाएर हर्ेन औधि उत्सुक थिए । तर भौतिक रूपमा दुवै हलचल गर्न असक्षम थिए र र्सप, बिच्छी र न्याउरीमूसाको सङ्गमको अवस्थामा एकअर्कोलाई एकोहोरो ताकिरहेका देखिन्थे । “डि.ई. साहेब के सारो बलियो होइसिंदो’रैछ ।” अघिपछि अरू हाकिमहरूलाई तह लगाउने नैना भाउजू आज पानीपानी बनेर स्वाँफ्वाँ गर्दै थिइन् । माथिका शब्दहरू उनको ओठमा टप्किदै र मसिनो बोलीमा मुखरित हुँदै थिए, निकै बेरको कसरतपछि थकित र क्लान्त नैना भाउजू सन्तुष्ट मानसिकता लिएर उठेकी थिइन् । अनि आफ्नै नग्न देहसँग आफै लजाउँदै हतारहतार कपडा लगाउन थालिन् । “तिम्रो सन्तान छैन – बाँझी जस्ती रैछ्यौ नि -” “छैन सर ! हुँदै भएन ।”
“किन त -” “खै किन भन्ने सर ! पहिले पहिले डाक्टर जचाउँदा हुँदै छ भन्थ्यो । हिजो आज त उहाँ बढी खानु हुन्छ । रक्सी बढी खानेको सन्तान हुँदैन रे सर ! अहिले आएको डाक्टर साहेबले भन्नु भा’को ।” “धेरै भन्या कति -” “एकदम कडा र्ठराचाहिँ एक बोतल खानु हुन्छ दिनको । त्यसपछि उहाँ इन्तु न चिन्तु भएर केही नखाई बेहोस भएर सुत्नु हुन्छ, उहाँसँग हिजोआज त सम्पर्क र बस उठ केही हुँदैन । अझ कहिले त एक बोतलले नपुगेर अर्को बोतल थप्नुहुन्छ । अरू नास्ता खाना सब बन्द । अनि यस्तोबाट के हुनु नि सर ।” “त लोग्ने नै किन चाहियो त । यस्तै अरूबाट भए पनि त भयो नि ।” दुवैको सम्वादको आखिरमा डिर्.इ. साहेबले भने । उनी अरू कुरा नथपेर धोतीको सप्कोले मुख छोप्दै मुस्कुराइरहिन् र कृत्रिम लज्जाले तिरोभूत बन्दै रहिन् । “अब जान्छु सर” उनी नमस्कार गर्दै हिँड्न लागिन्, तर एकैछिनपछि नै आशक्तिको औडाहाले अभिभूत भएका डर्ीर्.इ. साहेबले डढाक भालेले कुमारी कोरली पोथीलाई एक्कासी झम्टिएझैँ नैना भाउजूलाई फेरि झयाप्प अङ्गालोमा लिएर ओठको मधुपान गर्न थाले ।
“अहिले जान्छु सर फेरि आउँछु बरु !” नैना भाउजू पग्लिएर डल्लो पर्दै र भन्दै पनि थिइन् । समयमै अफिस पुग्नु पर्ने बाध्यताले गर्दा उनी कसोकसो गरेर फुत्किइन् अनि कपडा मिलाउँदै जाने चोर बाटोतिर लागिन् । “भर्खर दशमात्र बज्न लागेछ । पानी परेको दिन यतिचाँडो को अफिस आउँछ र -” नैना भाउजूको बाटो हर्ेर्दै डर्ीर्.इ. साहेबले भने । उनी मुस्कानको प्रत्युत्तर फ्याँक्दै नगिचैको पर्खाल नाघेर कार्यालयमा भित्रिइन् । आज हाकिमलाई भनेर ल्याएको कालो अङ्गुर डर्ीर्.इ. साहेबकै निवासमा छाडेर गइछन् । अर्को दिन पनि बिहानैदेखि पानी पर्यो । चौतारीको जमघट शून्य रहृयो । सबेरैदेखि नै नैना भाउजू पनि जिल्लाका बडाहाकिमको निवासमा थिइन् र कहिले दाल-चामल केलाउने, कहिले लुगा बिस्तारा मिलाउने, कहिले भान्छातिर गएर भान्छे केटालाई खाना राम्रो बनाउन अहर््राईसिकाई गर्ने जस्ता कामहरूमा व्यस्त थिइन् ।
प्रत्येक धन्दा र आदेश सँगै उनका चञ्चल आँखाहरू हाकिम साहेबतिर परिरहेका हुन्थे । हुन त प्रभातकालीन भेटमै उनीहरूले शारीरिक कामोद्दीपनको ज्वारभाटालाई शान्त पारिसकेका थिए र सम्भोगान्तरमा क्षरित आलो गन्ध डुङ्डुङ्ती गनाएर सन्तोषको अनुभूतिमा मग्न थिए । भर्खरै प्रौढताको सिँढीमा उक्लिन थालेको हाकिम साहेबको हृष्टपुष्ट ज्यू जवान देख्तै अक्सर नैना भाउजू भावातिरेकको अवस्थामा पुग्दथिन् । उनको हँसिलो चेहरा, रसिक स्वभाव, विनोदी आदत र सौर्न्दर्य पारखी चेतनाले गर्दा नैना भाउजू लठ्ठ परेकी थिइन् र अरू हाकिमसँग भन्दा उनैसँग बढी सम्पर्क पनि गर्दथिन् । तर उनीकहाँ लाग्ने भीड, व्यस्तता र बेसी जिम्मेवारीले गर्दा बेलाकुबेला जथाभावी आउन जान र बसउठ गर्ने जस्ता कुरामा ती दुवै र्सतर्क थिए ।
टाढा गाउँबाट एउटी युवती कल्कलाउँदो शिशु काखमा लिएर ढोका अगाडि उभिन आइछ । नैना भाउजूले कौशीबाट हेरेर भित्र साहेबमा जाहेर गरिन् । साहेबले चाख राखेर सोधखोज गरे । “सर हाम्रा आफ्नै विष्टले मलाई काठमाण्डु लगेर राख्नु भो, अनि दुइ जिउ भएपछि छाडेर कता जानु भो कता – यी बच्चा यही हो । न्याय पाउँ हजुर तिनलाई खोजेर मेरो घरजमको बन्दोबस्त गरिदिनु पर्यो सरकार !” दमिनी केटी भन्दै रुदै गर्दै थिई । उनको मन कुँडिएर घुँक्क घुँक्कमा विस्फोट हुँदै थियो । नैना भाउजू उसलाई सम्झाइबुझाई गर्दै त्यो बच्चा हातमा लिएर खेलाउँदै पनि थिइन् । उनलाई त्यो बच्चा मागेर पालौँ जस्तो लागिरहेको थियो । निःसन्तान नैना भाउजूको उजाड मातृत्व त्यो सुन्दर, स्वस्थ र असहाय बालकप्रति दयाद्र बनेर पग्लिदै थियो । बडाहाकिमले त्यो केटीसँग निवेदन लिएर तोक आदेश गरिदिए । अनि भान्से केटोलाई साथमा लगाएर कारवाही अघि बढाउन ठानातिर पठाइदिए । भान्छे केटो अघि लाग्यो । अलिक समालिएर त्यो केटी पछि लागी ।
“आ भर्खर प्रजातन्त्र आ’को छ के अफिस गइरहने सर सधैँ !” नैना भाउजूले अलि पात्तिएझैँ गरेर भनिन् । अनि सबै झयालढोकाहरू डामडुम्म लगाएर एउटामात्र खुलेको झयालबाट छिरेको छिर्के प्रकाशमा हाकिम साहेबलाई निर्वस्त्र बनाउँदै ओठ, मुख, हात र संवेदन अङ्गहरूलाई मधुरसले भिजाउन थालिन् । हुँदाहुँदै पलङ्गको चार्ँइचर्ुइ, चुरीहरूको छिर्लिङ विर्लिङ ओठको चित्कार र गलाको मधुरो चित्कारसँग ती दुइ नग्न स्त्री-पुरुषहरू समागमको मधुर महोत्सवमा मुखरित हुन थाले । ब्युँझदा हाकिम साहेब एक्लै रहेछन् । झयालढोका यथावत छोडेर नैना भाउजू अघि नै कतिबेर हिँडिसकिछन् । तर ओछ्यानभरि उनको शरीरको गन्ध फैलिएकै थियो । यत्रतत्र कपालका रौँहरू, सिरानीमा टाँसिएको ओठको लिपिस्टिक, टीका अनि चुरा फुटेर भुइँमा छिरलिएका टुक्राहरूले उनको निकट उपस्थिति र सामीप्य जनाइरहेका थिए । “दिवा शयन त्यति राम्रो नभए पनि आनन्दकारक अवश्य हो ।” उनी मनमनै सम्वाद मग्न हुँदै जुरुक्क उठे, मुख धोएर कपडा फेरे । अनि कार्यालयतिरको बाटो लागे । यस्तै-यस्तै गरी नैना भाउजूले त्यस जिल्लामा आउने सबैजसो हाकिमहरूको पालैपालो सच्चा साथी बनेर बैँसका दिनहरू मोजमस्तीमा बिताउँदै गइन् । उनको मादक गन्ध र कामुक स्पर्शबाट सबै अभिभूत रहे । नयाँ जीवनको सञ्चार लिँदै रहे ।
एक दिन मध्यराततिर अप्रत्याशित रूपमा नैना भाउजूका पति खोक्ताखोक्तै रगत छादेर बेहोस भएछन् । उनले चिच्याएर गुहार मागिन् । वरपर छरछिमेक जम्मा भएर बिरामीलाई अस्पताल पुर्याएथे । पौष्टिक आहारको कमी, अत्यधिक मदिरा र धुम्रपानले जर्जर बनेको क्षयरोग ग्रस्त कृषकायाबाट कतिखेर प्राणपखेरु उडिसकेछ । कसैले पत्तै पाएन । अस्पताल पुगेर डाक्टर देखाउँदा उनले जाँचबुझै नगरी मृत घोषित गरिदिए । टीका धागो चुरा पन्छाएर नैना भाउजूले विधिपूर्वक वैधव्य वरण गरिन् र धेरैबेरसम्म टीठलाग्दो गरी रोइरहिन् । बिहान सबैतिर हल्ला फैलियो । धेरैजसो हाकिमदेखि पियनसम्मका कर्मचारी, सङ्घ-सङ्गठनका पदाधिकारीहरू उपस्थित भएर नैना भाउजूलाई सम्झाइबुझाई गरे । उनीहरू सबैको बल मद्दतबाट लाश सद्गत गर्ने कार्य सम्पन्न भयो । सेतो परिधानमा कोराभित्र बस्दै क्रियापुत्री बनेर तेह्र दिनसम्मको काजक्रिया सम्पन्न गरिन् । अनि क्रिया समाप्तिपछि आसौचको खानपीन र लुगा कपडासमेत फुकाएर कोरा बाहिरको संसारमा उत्रिइन् । यतिखेर उनको शरीर हिउँजस्तै कञ्चन बनेको देखिन्थ्यो ।
फेरि एउटा कालखण्ड बितेछ, समयचक्र आफ्नै गतिमा गुड्दै थियो । केही समयदेखि रजस्वला हुन बन्द भएपछि विधुइ नैना भाउजू फेरि एकपटक स्तब्ध भइन् । डाक्टर जचाउँदा गर्भ रहेको ठहर भयो । व्यभिचार र अभिसारमा विचरण गरिरहने उनको घुमन्ते जीवनमा एक्कासि परिवर्तनहरू देखिए । उनी अन्तरमुखी र एकाङ्की बन्दै गइन् । अलि दिनपछि फेरि मन दरिँदै गयो । उनले आफूलाई दुइ जीउ भएको समाचार सबै सम्बन्धित हाकिमहरूकहाँ पुर्याएर खैलाबैला मच्चाइदिइन् । सबैले उनलाई गर्भपतन गराउने सल्लाह दिए । अनि त्यसको लागि पर्ने भाडा भरोट र आर्थिक दायित्व आफू ब्यहोर्न तत्पर पनि भए । तर नैना भाउजू अर्कै कुरा सोचेर दरिदै गएकी थिइन् । आफ्नो गर्भ संरक्षण गरेर एउटा सन्तान जन्माउने र कुनै हाकिमको धर्मपत्नी भएर जीवन बिताउने चाह उनमा तीव्र बन्दै गयो । उनी त्यहाँका अलिक जवान र कमाई काज हुने खाइलाग्दा हाकिमहरूलाई आफू श्रीमती भएर बस्ने प्रस्ताव राखेर मन चोर्न थालिन् । त्यसपछि उनलाई देख्नेबित्तिकै सबै हाकिमहरू दुर्दुहाइ गरेर तर्सिन थाले ।
राजधानीमा फेसबुकबाटै यौन व्यवसाय ! यौनकर्मीले यसरी गर्छन सम्पर्क